मोवाइल फोन अफ गरेर कता लुके शिल्पा र छबि ? - Everest Dainik - News from Nepal
मोवाइल फोन अफ गरेर कता लुके शिल्पा र छबि ?
काठमाडौं, साउन १६ । निर्माता छबिराज ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलविरुद्ध साउन ८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुमतिमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो।
छबिकी जेठी श्रीमती हेमा ओझले दुबैविरुद्ध दर्ता गरेको बहुविवाहको उजुरीको आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। पुर्जी जारी हुनु अघिल्लो दिनसम्म मिडियामा आइरहेका अनि मोबाइल अन नै रहेका उनीहरु पक्राउ पुर्जी जारी भएको दिनदेखि सम्पर्कविहीन छन्।
दुबैको मोवाइल स्विच अफ छ। प्रहरी गोजीमा पक्राउ पुर्जी बोकेर उनीहरु हुनसक्ने सम्भावित स्थानमा पुगिसकेको छ। तर, फेला पार्न सकेको छैन। श्रोतका अनुसार गत बुधबार शिल्पा भोजपुरी फिल्म जय शम्भुको सुटिङमा व्यस्त थिइन्।
त्यही दिन उनले फेसबुकमा सुटिङका दृश्यसमेत राखेकी थिइन्। त्यसपछि पनि उनी धेरै दिन सामाजिक सञ्जालमा एक्टिभ नै देखिएकी थिइन्। पक्राउ पुर्जी जारी भएको दोश्रो दिनदेखि शिल्पाको मोवाइल स्विच अफ भयो। छबिले त त्यही दिन मोवाइल स्विच अफ गरेका थिए।
उनीहरु निकटका श्रोत भने यी दुबै कहाँ छन् केही बोल्न चाहँदैनन्। यी दुबैको खोजीमा सक्रिय काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक प्रहरी अधिकारीले उनीहरु हुनसक्ने सम्भावित सबै ठाउँमा पुग्दासमेत फेला नपरेको दाबी गरे। यो खबर आजको शुक्रबार साप्ताहिले छापेको छ ।
ट्याग्स: छबि, शिल्पा